သင်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ အမျိုးသားကို ရွေးချယ်နိုင်မှာလား | Buzzy
သင်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ အမျိုးသားကို ရွေးချယ်နိုင်မှာလား
အမျိုးသမီးများ အနေနဲ့ ဘဝအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အမျိုးသားကို ရွေးချယ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလား ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်ပါ ။
သင်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်ထားပါတယ် ၊ သူဟာ ချက်ပြုတ်တက်တယ် ၊ သန့်ရှင်းရေး လုပ်နိုင်တယ် ၊ ဒါ့အပြင် သူဟာ သင့်အပေါ်ကို အလွန်ဂရုစိုက်ပြီး သင့်အလိုကိုလည်း လိုက်မယ့်သူ ၊ သင့်ကိုပဲ အစစအရာရာ ဦးစားပေးမယ့် ရှားမှရှားတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ဦးပေါ့။
သူ့ရဲ. စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ပြုမူမှုပုံစံလေးတွေကို သင်က စွဲလန်းကောင်း စွဲလန်းနေပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် သူရဲ. ခံစားမှုပုံရိပ်တွေဟာ ထိလွယ်ရှလွယ် ဖြစ်လွန်းတာမို့ ရေရှည်မှာ သင်စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ် ။ သူဟာ အမြဲလိုလို စိတ်အားငယ်လွန်းတာမို့ သင်ကပဲ သူ့ကို ဂရုစိုက်နေရပါလိမ့်မယ် ။
သူဟာ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးလွန်းပြီး သူလုပ်ချင်တာလုပ် အချိန်ကုန် နေတက်ပါတယ် ။ သင့်နဲ့ကျရင် အချိန်မရှိပေမယ့် သူ့အနုပညာဈာန်ဝင်စားပြီး ဒါတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေတက်တာကို သင်ဒေါသဖြစ်မိပါလိမ့်မယ် ။ သင်နဲ့ကျ အေးစက်စက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပြီး သူ့အနုပညာရှင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့က အမြဲလိုလို တက်ကြွနေတာကို သင်မြင်ရရင် စိတ်မဆိုးပဲ နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
သူဟာ တကယ်ကို အေးဆေးတဲ့ လူကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့် သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူတွေမဖြစ်နိုင်ပဲ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေအဖြစ် လမ်းခွဲရနိုင်ပါတယ် ။ သင် စိတ်ဓါတ်ကျ ပင်ပန်းနေတိုင်း သူက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို အနားမှာ အမြဲလိုရှိနေပေးမှာပါ ၊ သင်တို့က ချစ်သူတွေလို နေထိုင်ဖို့ ခက်ခဲတာကလွဲလို့ ကျန်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။
သူဟာ ငွေကြေးအဆင်ပြေလွန်းပြီး သင့်ကိုလည်း ဒါတွေကို အတူသုံးစွဲဖို့ ဘယ်တော့မှ မေ့မထားပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ. ငွေဂုဏ်ကြောင့် မောက်မာတာမျိုးဟာ သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှု များစေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ သူနဲ့အတူတူ ရှိနေရချိန်မှာ သူ့ရဲ. ငွေကြေး အရှိန်အဝါကြောင့် သင်ဟာ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်မှုကို အမြဲလိုလို ခံစားရမှာပါ။
သူကတော့ သင့်အတွက် တကယ်လိုအပ်တဲ့ လူလို့ ထင်ရနိုင်စရာ ရှိပါတယ် ။ သင့်ကို သူက စိတ်ဓါတ်တက်ကြွအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပေမယ့် အရမ်းကိုဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သူ့ရဲ. တိုက်တွန်းလှုံဆော်မှုတွေဟာ သင့်ကို ဆိုးရွားစွာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ သူ့နောက်ကို ကိုယ်ကမှီအောင် မလိုက်နိုင်တာမို့ စိတ်ဆင်းရဲရပါလိမ့်မယ်။
သူကတော့ ဆိုးရွားလွန်းပါတယ် ၊ သူ့ရဲ. ရည်းစားဟောင်း အကြောင်းအမြဲလိုလို သင့်ကို ပြောနေတက်ပြီး ၊ အခြားကောင်မလေးတွေကိုလည်း စိတ်ကူးယဉ်နေတက်သူပေါ့ ၊ သင်က ဘယ်လောက်ပဲ နားလည်မှုပေးပေး ၊ သည်းခံသည်းခံ သူကတော့ အခြားတစ်ယောက်ဆီ သိပ်မကြာခင် ပါသွားမှာပါ ။
သူ့ရဲ. အရိပ်အောက်မှာ သင်ဟာ ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျှော့ပါးလာပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူ့မှာ သင်ဖြစ်စေချင်တာတွေ မရှိ၊ မလုပ်တာကို မြင်ရပြီး သင်စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်။